विरामीको मृत्युपछि ओम अस्पतालमा तोडफोड
२o७५ श्रावण ५ शनिबार / Saturday, July 21, 2018
२o७४ भदौ २८ बुधबार
काठमाडौ । ओम अस्पतालमा नाकको शल्यक्रिया गर्दा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ ।
बुधबार दिउँसो बुटवलकी ४४ बर्षिय कमला भट्टराईको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले अस्पताल परिसरमा नाराबाजी गर्दै तोडफोड गरेका छन् । उनी चार दिनअघि शनिबार नाकको अप्रेशन गर्न अस्पताल भर्ना भएको बताइएको छ ।
मृतकका आफन्तले भने डाक्टरको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन् । बिरामीको मृत्युबारे छानबिन गर्नुपर्ने, अस्पतालले आफ्नो लापरबाही स्विकारेर माफी माग्नुपर्ने मृतकका आफन्तहरुको माग छ । माग पुरा नभए आन्दोलनमा जाने उनीहरुले बताएका छन् ।
अस्पताल प्रशासनले भने मृतकको उपचारमा डाक्टरको लावरवाही अस्विकार गरेको छ । सुरुमा विरामीलाई अप्रेशन गरेपछि पोस्ट वार्डमा सारिएको र स्वास्थ्य सामान्य रहेको बताउदै अस्पतालका प्रशासन प्रमुख विजय प्याकुरेलले अचानक विरामीको ब्लड प्रेशर लो भएपछि आइसीयुमा सारिएको र मल्टी अर्गान फेलिएर भएर विरामीको निधन भएको जानकारी गराए ।
अप्रेशन वरिष्ठ डा. आरपी गुरागाईले गरेका थिए । यस प्रकारको अप्रेशनमा इन्फेक्सन हुन सक्ने भन्दै प्याकुरेलले मृतकका आफन्तलाई डाक्टरको लावरवाही जस्तो लागे छानबिन गरि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन अस्पताल तयार रहेको बताए ।
विमान दुर्घटनामा पत्नी गुमाएका डा.रिजवानको ओम अस्पतालमा उपचार हुदै
काठमाडौँ । सोमबार दुर्घटना भएको युएस बंगलाको विमानमा बंगलादेशी डाक्टर दम्पति परेका छन् । ६ महिनाअघि मात्र विवाह गरेका डा. रिजवानले दुर्घटनामा आफ्नी श्रीमतीलाई गुमाएका छन् । एमडी डाक्टर रिजवान उल हकको
नेता निधिलाई भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा ओम अस्पतालमा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँको ओम अस्पतालमा उपचार गराइरहेका नेता विमलेन्द्र निधिलाई भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । बुधबार बिहान अस्पताल पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले नेता निधिको
कांग्रेस नेता निधि अस्वस्थ, ओम अस्पतालमा उपचार गर्दै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि अस्वस्थ भएका छन् । अहिले काठमाडौँको ओम अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गरिरहेका निधि आज अस्पतालमै बस्ने बताइएको छ । चुनाव प्रचारका क्रममा धेरै नै धपेडी
ओममा विरामीको मृत्यु प्रकरणमा मन्त्रालयले छानबिन थाल्यो
काठमाडौँ । ओम अस्पतालमा नाकको शल्यक्रियाका क्रममा बुधबार कमला भट्टराईको मृत्यु भएको प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विनोदमान श्रेष्ठको संयोजकत्वका समिति गठन गरी छानबिन थालेको हो ।
कर लगाएपछि व्यवसायीको आन्दोलनले भक्तपुरमा खानेपानीको हाहाकार
समृद्धिको खाकाअनुसार शैक्षिक जनशक्तिको योजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
साताको सेयर : कारोवार रकम ३१ दसमलव ३२ प्रतिसतले घट्यो
काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर अझै उठ्न सकेन, दुर्गन्धित बन्यो शहर
डा.केसीद्वारा काठमाडौमा उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा लिन अस्विकार, वार्ता हुन सकेन
नेपालले हम्पशायर हग्स क्रिकेट क्लबसँग आज पहिलो अभ्यास खेल खेल्दै
यस सिजन रियल म्याड्रिड नजाने भए नेइमार !
आकाश र आँचलको फिल्म ब्ल्याकको गीत सार्वजनिक
नेपाली क्रिकेट टोली बिहीबार बिहान बेलायत जाने, यस्तो छ नेपालको खेल तालिका
स्पेनभन्दा कम कर तिर्नुपर्ने कारणले रोनाल्डो इटाली गए - ला लिगा प्रमुख